Alshabaab oo sheegtay dilkii Col. Muslim iyo sababta ay u beegsadeen – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
5th August 2014 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Alshabaab ayaa sheegtay weerar ismiidaamin ah oo shalay galab ka dhacay magaalada Boosaaso, laguna dilay ilaa 8 qof oo labo ka mid ah saraakiil ahaayeen.
Abuu Muscab oo ah Afhayeenka ciidanka Alshabaab oo lahadlay idaacadda Andalus ayaa sheegay in Alshabaab weerar guuleystay ku dileen taliyihii ciidanka booliska gobolka Bari ahaana madaxii guddiga ammaanka Puntland Col. C/raxmaan Cabaas (Muslim) iyo saraakiil kale oo ka hoos shaqeynaysay.
“Holwgal guulaystay ayay mujaahidiintu ka fuliyeen magaalada Boosaaso waxayna ku dileen saraakiil ashahaadda ladirir ah oo uu ka mid ahaa taliyihii booliska Bari ugu magacaawnaa maamulka Ridada, ilaah ayaa ku mahadsan Mujaahidiinta u fududeeyay howlgalka”ayuu yiri Sheekh Abuu Muscab.
Alshabaab ayaa sheegay in sababta ay u beegsadeen Col.C/raxmaan Cabaas iyo saraakiisha kale ay tahay iney dhibaato ku hayeen shacabka muslimiinta gobolka Bari gaar ahaan culimada iyo ardayda waxka barata madaarista, sida warka loo dhigay.
Alshabaab ayaa sidoo kale sheegayn in sarkaalka la dilay ee Col. C/raxmaan Cabaas oo Muslim ku magic dheeraa uu dad Musliimn ah ugacan geli jiray sirdoonada Mareykanka iyo Itoobiya.
Shalay galab ayay ahedy markii nin isi soo miidaamiyey uu isku qarxiyey Taliye C/raxmaan Cabaas oo rag kale oo la joogay afaafka hore ee saldhiga booliska gobolka Bari ee magaalada Boosaaso.
Wiil uu dhalay siyaasiga Feysal Cali Waraabe oo ku biiray ISIS, una hanjabay Finland